Somali News 09.27.21 | KWIT
Reynolds wuxuu difaacay go'aanka isagoo leh amniga xuduudaha waa mas'uuliyad federaal ah oo aan si waafi ah uga hadlin maamulka Biden ee Dimuqraadiga ah.
Maanta waxay ku beegan tahay laba toddobaad tan iyo markii garsoore federaal ah si ku meel gaar ah u hor istaagay sharciga Iowa ee mamnuucaya waajibaadka maaskaro ee dugsiyada.
Tan iyo markaas, tiro ka mid ah degmooyinka iskuulka Iowa ayaa soo saaray waajibaadka maaskaro ee ardayda iyo shaqaalaha.
Ra'yiururin cusub ayaa siineysa aragti ku saabsan sida Iowans ay u qabaan sharciga. Codbixintii ugu dambeysay ee Des Moines/Mediacom ayaa muujineysa in Iowans ay u kala qeybsameen dhexda.
Karraaniga maxkamadda federaalku wuxuu leeyahay amar -ka -qaadistu waxay socon doontaa ilaa xaakimku xukumo in la hayo caddeymo ku filan oo kiiska lagu sii wadi karo.
Shirkadaha ka shaqaynaya inay dhistaan ​​dhuumaha si ay u qabtaan kaarboon laba ogsaydh oo ay soo saaraan dhirta ethanol ayaa laga yaabaa inay la kulmaan mucaarad beeralayda iyo kooxaha deegaanka ee Nebraska iyo Iowa.
Mid ka mid ah shirkadaha, Summit Carbon Solutions, ayaa durba bilowday inay la xiriirto dadka dhulka leh oo ku saabsan mashruuca $ 4.5 bilyan.
Taageerayaasha ayaa sheegaya in dhuumaha dhuumaha ay badbaado leeyihiin waxayna hoos u dhigi doonaan saameynta kaarboon ee soo saaridda shidaalka galleyda ku salaysan.